लहान । पशुपालन ग्रामिण क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण पेशा हो । जसले दैनिक जीवन चर्याको साथसाथै कठिन समयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । फूल्काहाकटृी वार्ड. न. ९ निवासी, हाल लाहान ३ बस्ने ४२ वषर््िाय देवकान्त सिंह एक कुसल र सफल एवं संघर्षशिल गाईपालक हुन् । उनी विज्ञान विषयमा स्नातक गर्नुभएको र २०६९ सालदेखि गाई पालन गर्दै आएको यो पेशाले उनको परिवार मात्र नभई समाजसेवाको काममा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका छन् । केवल दुई गाई (जर्सि नस्लका) ले दैनिक रुपमा ६० लिटर दुध संकलन गर्छन् । सो दुध बेचेर सिंहले दैनिक आम्दानी रु.३५सय गर्छन् भने गाईमा लाग्ने खर्च रु.६ सय बताउंछन् उनी । करिव पाँच कठठामा घाँस लगाएका छन् । भविष्यमा पशुपालनलाई एउटा वृहत व्यवसायीक रुप दिने सिंहको योजना रहेको छ । कलेज अध्ययन पश्चात धेरै नै आर्थिक एवं पारिवारिक संकट झेल्नुपरेको सिंह गाई पालनले पूर्ण सन्तुष्ट भएको बताउंछन् । सिंह गाईपालनको साथ साथै विभिन्न सिपमुलक तालिम र समाजिक कार्यहरुमा पनि संलग्न छन् । एक छोरा र एक छोरीको बुवा रहेका सिंहले यहि गाईपालनले छोरालाई डाक्टर र छोरीलाई वकिल बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।
पशुपालन शुरु गर्नुभन्दा पहिला उनी शिक्षण पेशामा थिए । विज्ञान विषयमा स्नातक गरेपछि उनी आप्mनो शिक्षण पेशा रामेछाप कालिका मा. वि., रामेछापमा शुरु गरेका थिए । उनको कुशल अध्यापन शैलीले विधार्थीहरु ज्यादै नै सन्तुष्ट थिए । तर, उनी भन्छन् — पहाडिया समाजको मेरो प्रतिको सोच अनौठो र अपत्यारिलो थियो । ूम पहाडिया रोगी मानसिक्ताको शिकार बन्न पुगें । रंगभेदी व्रिmयाकलापले चरमसिमा नाघ्यो । पहाडे शिक्षकहरुले मलाई मधेशी भनेर हेप्न पछि परेनन् । मैले आप्mनो जन्मस्थानमा रहेका पहाडे मूलका अल्पसँख्यक वासीलाई कहिले कुनै मधेशीले हेपेको देखेको थिईन् । जेहोस रामेछापको मेरो बसाइ साह््रै कष्टकर रहयो । सधै घृणा र तिरस्कार खेप्नुभन्दा मैले त्यो ठाउँ छोडने निर्णय गरे ।ू
हाल सिंह गाईपालनको साथसाथै कर्मठ राजनेता पनि बनेका छन् । उनी २०५२ पछि राजनीति मा लागे । अहिले तमलोपा सदभावना को जिल्ला सचिवको रुपमा समाजिक उत्थानमा लागी परेका छन् । विधार्थी जीवनकालदेखि नै संघर्ष गर्दै आएका सिंह मधेशप्रति भईरहेको सरकारको सौतेलो व्यवहार प्रति ज्यादै असन्तुष्ट छन् । उनको मुख्य उदेश्य मधेशलाई पूर्ण रुपमा भेदभाव रहित देखनु हो । महाविनाशकारी भूकम्पमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुखस् व्यक्त गर्दै उनले अकालमै ज्यान गुमाएका हजारौ नेपालीलाई श्रद्धान्जली दिदै शोकाकुल परिवारजनलाई संवेदना प्रकट गरेका छन् । र साथै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ लाभको कामना पनि गर्छन् । उनी भन्छन् —‘मेरो लागि सिंगो विदेशी रोजगार जस्तो गाई पालन नै हो ।’ ‘ आफ्नै देशमा धेरै कमाउंने अधार छन् ,यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ । अनि देशको विकास पनि यसैको शिपकलाले नै हुने हो ।’